Basic fahalalana ny LED eny an-dalana jiro - Yangzhou Langxu Lighting teknolojia Co., Ltd.
Ny jiro LED dia jiro semiconductor. Izy io dia karazana loharanon'ny hazavana avo lenta hazavana izay afaka mamoaka hazavana miaraka amin'ny angovo elektrika malemy miorina amin'ny fiasa semiconductor PN. Amin'ny volavolan-tsivana miovaova sy ny tsindrona mihetsika, ny elektronika voatsindrona ao anaty lavaka ao amin'ny faritra P ary ny faritra atsimo dia handefa sary amin'ny fikaonan'ny taratra aorian'ny fampifangaroana ny faritra loharano, mifamadika mivantana ny angovo ho angovo maivana. Izy dia loharano maivana mangatsiaka mavesatra, miaraka amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, fandotoana malina, tsy fahampian-jiro, famokarana hazavana avo lenta, ela velona ary ireo toetra hafa, noho izany, ny jiro LED dia ho lasa safidy tsara indrindra amin'ny fanodinana famokarana angovo azo avy amin'ny làlana.
1. Ny mampiavaka ny jiro an-dalambe LED mihitsy - ny tsy fandraisana andraikitra amin'ny hazavana, tsy misy hazavana miparitaka, miantoka ny fahombiazan'ny fanazavana.
2. Ny jiro LED dia manana endrika famolavolana optika tokana, izay manasongadina ny jiron'ny jiro LED an-dalambe mankany amin'ny faritra jiro takiana, manatsara kokoa ny fahombiazan'ny jiro, mba hahatratrarana ny tanjon'ny angovo angovo.
3. Ny fahombiazan'ny loharanon'ny jiro LED dia nahatratra 110-130lm / W, ary mbola betsaka ny efitrano ho an'ny fampandrosoana, miaraka amin'ny sandan'ny teoria 250lm / W. Ary ny fahombiazan'ny luminescence ny jiro sodium avo dia mitombo miaraka amin'ny fitomboan'ny herinaratra, noho izany, ny jiro LED amin'ny ankapobeny hazavana dia matanjaka noho ny tsiran'ny sodium avo lenta; Ity fahombiazan'ny fahazavana amin'ny ankapobeny ity dia teorika, fa raha ny tena izy dia ny fahombiazan'ny hazavana tsiranoka sodium avo mihoatra ny 250W dia avo noho ny an'ny LED.
4, chromatin ny hazavana LED an-dalambe dia avo lavitra noho ny jiro sodium avo lenta, ny tsindry sodium chromatin ny tsindry vita amin'ny tsilo, 23 fotsiny, ary ny fanondroan-jiro chromatin an'ny arabe LED ho 75 na mihoatra. Ny hazavana hazavana eny an-dalambe dia mety ho ambany noho ny tsindry sodium avo lenta 20% na mihoatra, (manondro ireo fenitry ny jiro anglisy.
5, ho simba kely maivana, herintaona maivana latsaky ny 3%, mampiasa 10 taona mbola mahafeno ny fepetra takian'ny fanararaotana amin'ny fampiasana lalana, ary miharan'ny fitrandrahana sodium avo lenta, herintaona na mahery dia nidina mihoatra ny 30%, noho izany, ny lalana LED jiro amin'ny fampiasana ny famolavolana herinaratra dia mety ambany noho ny jiro sodium avo lenta.
6. Ny jiro LED dia mitondra fitaovana fanaraha-maso mandeha ho azy, izay mety hahavita ny fampihenana ny herinaratra farany sy ny fitahirizana angovo eo ambanin'ny fepetra takian'ny fahazavana amin'ny fangatahana jiro isan-karazany. Ny jiro LED arak'asa matotra dia afaka mahatsapa ny fitrandrahana solosaina, ny fanaraha-maso ny fotoana, ny fanaraha-maso ny hazavana, ny fanaraha-maso ny hafanana, ny fanaraha-maso lavitra, ny fanaraha-maso mandeha ho azy ary ny fiasa hafa ataon'ny olombelona.
7. Ny LED dia fitaovana enti-mavesatra ambany. Ny volavolan-dalàna mitondra fiara iray tokana dia herinaratra azo antoka.
8. Ny sombin-tsolika LED tsirairay dia ampahany kely fotsiny, ka azo omena amin'ny fitaovana isan-karazany izy io, ary mety ho an'ny tontolo mora volavola.
9, fiainana maharitra: afaka mampiasa mihoatra ny 50,000 ora, manome toky ny telo taona. Ny tsy fatiantoka dia ny fiainana tsy maintsy omena ny herinaratra.
10, fahombiazan'ny hazavana avo lenta: ny fampiasana mofomamy mihoatra ny 100LM, raha ampitahaina amin'ny angovo fanaovan-jiro avo lenta maoderina izay mitahiry mihoatra ny 75%.
11. Fametrahana mora: tsy mila onjam-tariby, tsy mila mpanamboatra, sns Mametaka mivantana ny mpametaka jiro amin'ny tsato-jiro na mamoritra ny loharano maivana ao anaty akorandriaka kely tany am-boalohany.
12, fifehezana hafanana tena tsara: ny fifehezana ny hafanana amin'ny fahavaratra eo ambanin'ny 45 degre, ary ny fampiasana ny passive heat, ny fiarovana ny hafanana amin'ny fahavaratra dia tsy ampy.
13, kalitao azo itokisana: ny herin'ny fizaran-tany manome ny singa avo lenta rehetra an'ny USES, ny tsirairay amin'ny LED dia manana fiarovana miverimberina misimisy kokoa, tsy mila manahy ny fahasimbana.
14, loko fanamiana: tsy misy lesoka, tsy hanatsarana ny hazavan'ny sorona ny fanamiana loko, mba hahazoana antoka ny loko fanamiana tsy misy aperture.
15, LED dia tsy misy rakitra metaly manimba, tsy toy ny jiro sodium avo na jiro halide vy rehefa mikapoka amin'ny tontolo iainana.
Raha ny voalazan'ny fitsipika etsy ambony dia mahavariana ny fiantraikan'ny angovo famokarana herinaratra avo lenta, izay afaka mamonjy herinaratra mihoatra ny 60% amin'ny alàlan'ny fanoloana ny jiro sodium avo lenta.
Vidiny kely fikojakojana: raha ampitahaina amin'ny jiro arabe nentim-paharazana, ny jiro LED dia manana ny vidiny fitandremana ambany. Aorian'ny fampitahana dia azo atao indray ny vidin'ny fidirana ao anatin'ny 6 taona.